သင့် ဖုန်းမှာ Blue Light Filter ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
စမတ်ဖုန်းများမှာပါတဲ့ Night Mode စွမ်းဆောင်ချက်ဟာ ညအချိန် စာဖတ်တဲ့အခါမှာ စမတ်ဖုန်းကနေ ထုတ်လွှင့်တဲ့ Blue Light ကို လျှော့ချပေးတဲ့အတွက် မျက်စိ ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Night Mode ဟာ Blue Light Filter ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Tutorial မှာ Night Mode ကို အသုံးပြုနည်းများကို ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစုဟာ စမတ်ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ၊ တက်ဘလက်နဲ့ တီဗီများ အရှေ့မှာ အချိန်ကုန်နေတဲ့ အတွက် မျက်စိထိခိုက်စေတဲ့ နှုန်းဟာလည်း မြင့်တက်လာပါတယ်။ Blue Light ဟာ လူတွေ အိပ်ပျော်စေအောင် အဓိက ကူညီပေးတဲ့ မီလာတိုနင် ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် အိပ်စက်မှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူများက Night Mode များကို ထည့်သွင်းပေးလာကြပါတယ်။ Blue Light ရဲ့ ဆိုးကျိုးများကို Blue Light နဲ့ မျက်လုံး ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါး မှာ အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
iOS 9.3 မှာ Apple က Night Shift ကို စတင် ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Settings > Display & Brightness > Night Shift မှာ Enable လုပ်ပါ။
ညဘက်ရောက်တိုင်း Night Shift ကို အလိုအလျှောက် ဖွင့်ပေးဖို့ Schedule လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Samsung Galaxy Phone အများစုမှာ Blue Light Filter ပါပါတယ်။ သူ့ကို အမြန်ဆုံး ဖွင့်ဖို့ နည်းက Notification Bar မှ Quick Settings ကနေ ဖြစ်ပါတယ်။
Settings > Display > Blue light filter ထဲကနေလည်း ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Google Pixel Phone များမှာ Android Oreo ပါတဲ့ Stock Android ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
Settings > Display > Night Light ထဲမှာ ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
အခြား Android Phone များ
စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူများက သူတို့ရဲ့ စမတ်ဖုန်းများမှာ Night Mode များကို ထည့်သွင်းပေးထားကြပါတယ်။ Huawei , Asus, OnePlus, Xiaomi အပါအ၀င် အခြား စမတ်ဖုန်း ဘရန်းများမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် Night Mode များ ပါပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စမတ်ဖုန်းများမှာ Night Mode ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Activate လုပ်ရတဲ့ နေရာများကတော့ မတူညီကြပါဘူး။ Settings> Display ထဲမှာ ရှာဖွေပါ။ Notifications Bar မှ Quick Settings မှာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
LG က Comfort View ၊ HTC နဲ့ OnePlus က Night Mode ၊ Huawei က Eye Care ၊ Motorola က Night Display ၊ Xiaomi က Reading Mode လို့ အမည်ပေးထားကြပါတယ်။
သင့် စမတ်ဖုန်းမှာ Night Mode မပါလို့ စိတ်ညစ်စရာ မလိုပါဘူး။ Google Play Store မှာ Night Mode စွမ်းဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Apps များစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက နာမည်အကြီးဆုံး တစ်ခုမှာ Bluelight Filter ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ Filter Color ၇ မျိုးတောင် အပိုပါပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Notification Widget နဲ့ Schedule စွမ်းဆောင်ချက်များလည်း ပါပါတယ်။
သငျ့ ဖုနျးမှာ Blue Light Filter ကို ဘယျလို သုံးမလဲ ?
စမတျဖုနျးမြားမှာပါတဲ့ Night Mode စှမျးဆောငျခကျြဟာ ညအခြိနျ စာဖတျတဲ့အခါမှာ စမတျဖုနျးကနေ ထုတျလှငျ့တဲ့ Blue Light ကို လြှော့ခပြေးတဲ့အတှကျ မကျြစိ ထိခိုကျခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ Night Mode ဟာ Blue Light Filter ဖွဈပါတယျ။ ဒီ Tutorial မှာ Night Mode ကို အသုံးပွုနညျးမြားကို ပွောပွမှာ ဖွဈပါတယျ။
လူအမြားစုဟာ စမတျဖုနျး၊ ကှနျပွူတာ၊ တကျဘလကျနဲ့ တီဗီမြား အရှမှေ့ာ အခြိနျကုနျနတေဲ့ အတှကျ မကျြစိထိခိုကျစတေဲ့ နှုနျးဟာလညျး မွငျ့တကျလာပါတယျ။ Blue Light ဟာ လူတှေ အိပျပြျောစအေောငျ အဓိက ကူညီပေးတဲ့ မီလာတိုနငျ ဟျောမုနျးထုတျလုပျမှုကို ထိခိုကျစတေဲ့အတှကျ အိပျစကျမှုကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ အဲဒီအတှကျ စမတျဖုနျး ထုတျလုပျသူမြားက Night Mode မြားကို ထညျ့သှငျးပေးလာကွပါတယျ။ Blue Light ရဲ့ ဆိုးကြိုးမြားကို Blue Light နဲ့ မကျြလုံး ကနျြးမာရေး ဆောငျးပါး မှာ အသေးစိတျ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
iOS 9.3 မှာ Apple က Night Shift ကို စတငျ ထညျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။
Settings > Display & Brightness > Night Shift မှာ Enable လုပျပါ။
ညဘကျရောကျတိုငျး Night Shift ကို အလိုအလြှောကျ ဖှငျ့ပေးဖို့ Schedule လုပျထားနိုငျပါတယျ။
Samsung Galaxy Phone အမြားစုမှာ Blue Light Filter ပါပါတယျ။ သူ့ကို အမွနျဆုံး ဖှငျ့ဖို့ နညျးက Notification Bar မှ Quick Settings ကနေ ဖွဈပါတယျ။
Settings > Display > Blue light filter ထဲကနလေညျး ဖှငျ့နိုငျပါတယျ။
Google Pixel Phone မြားမှာ Android Oreo ပါတဲ့ Stock Android ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။
Settings > Display > Night Light ထဲမှာ ဖှငျ့နိုငျပါတယျ။
အခွား Android Phone မြား
စမတျဖုနျး ထုတျလုပျသူမြားက သူတို့ရဲ့ စမတျဖုနျးမြားမှာ Night Mode မြားကို ထညျ့သှငျးပေးထားကွပါတယျ။ Huawei , Asus, OnePlus, Xiaomi အပါအဝငျ အခွား စမတျဖုနျး ဘရနျးမြားမှာလညျး ကိုယျပိုငျ Night Mode မြား ပါပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ စမတျဖုနျးမြားမှာ Night Mode ကို အသုံးပွုဖို့အတှကျ Activate လုပျရတဲ့ နရောမြားကတော့ မတူညီကွပါဘူး။ Settings> Display ထဲမှာ ရှာဖှပေါ။ Notifications Bar မှ Quick Settings မှာလညျး ရှိတတျပါတယျ။
LG က Comfort View ၊ HTC နဲ့ OnePlus က Night Mode ၊ Huawei က Eye Care ၊ Motorola က Night Display ၊ Xiaomi က Reading Mode လို့ အမညျပေးထားကွပါတယျ။
သငျ့ စမတျဖုနျးမှာ Night Mode မပါလို့ စိတျညဈစရာ မလိုပါဘူး။ Google Play Store မှာ Night Mode စှမျးဆောငျခကျြကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Apps မြားစှာ ရှိပါတယျ။ အဲဒီအထဲက နာမညျအကွီးဆုံး တဈခုမှာ Bluelight Filter ဖွဈပါတယျ။ သူ့မှာ Filter Color ၇ မြိုးတောငျ အပိုပါပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ Notification Widget နဲ့ Schedule စှမျးဆောငျခကျြမြားလညျး ပါပါတယျ။